Chin World News – Page 33
Sermons December 20, 2018
Laimi Vialte Nih Khamhnak Kan Hmu Dih Lai Maw?
Laimi Vialte Nih Khamhnak Kan Hmu Dih Lai Maw? Lairam cu Khrihfa ram kan si. Zapi ruahnak ah cun 95-8% hrawng hi Khrihfa kan si i,atangmi cu biaknak dang an si.Pathian dawtnak thawngin…
Knowledge December 20, 2018
Nau A Poi Liomi Hna Caah Hihi Theih Bak Ding
Naupawi lio mi hna nih Arti hi ei lengmang dingasi. Arti hi zeitlukin dah Nau caaharak tthat timi kongah fiangtein thanhnak an tuahmiasi. Cun Federation of American Sociaty’s for…
World News December 20, 2018
မြန်မာအမျိုးသမီးကို တရုတ်ထံရောင်းစားသူ နှစ်ဦးကို ထောင် ၁၂ နှစ်စီချလိုက်
မြန်မာမိန်းကလေး တစ်ဦးကို တရုတ်အမျိုသားထံ ရောင်းစားသူ နှစ်ဦးကို ထောင်ဒဏ် ၁၂ နှစ်စီ ချမှတ် လိုက် တယ်လို့ မြန်မာနိုင်ငံရဲတပ်ဖွဲ့က သတင်းထုတ်ပြန်ပါတယ်။ ရောင်းစားခံရတဲ့ မိန်းကလေးကတော့ အသက် ၂၀ အရွယ် ရှိပြီးဖြစ်ကာ တောင်တွင်းကြီးမှာ နေထိုင်သူ ပါ။ အဲဒီမိန်းကလေးကို တောင်တွင်းကြီးမှာနေတဲ့ အမျိုးသမီးနဲ့ လာရှိုးမှာနေတဲ့အမျိုးသမီးတို့ ပူးပေါင်းပြီး ရောင်းစားလိုက်တာလို့သိရပါတယ်။ ရောင်းစားခဲ့တာကတော့ ပြီးခဲ့တဲ့ နှစ် ဇူလိုင်လအတွင်းက ဖြစ်ပါတယ်။ တရုတ်ယောကျာင်္းကိုယူပြီး တစ်နှစ်…
အမေရိကန်၊ နယူးယောခ့်မြို့ရဲ့ ပန်းခြံတစ်နေရာမှာ စုံတွဲတစ်တွဲဟာ နေ့ခင်းကြောင်တောင်အချိန်ကြီး ဖြစ်နေပါလျှက်၊ ဒါ့အပြင် ဘေးနားမှာ ဖြတ်သွားဖြတ်လာလူတွေ စည်းကားနေဆဲဖြစ်ပါလျှက် လိင်ဆက်ဆံခဲ့ပါတယ်။ အဆိုပါဗီဒီယိုဖိုင်ဟာ အွန်လိုင်းပေါ်မှာ ပျံ့နှံ့ခဲ့ပြီး လူတွေရဲ့ ဝေဖန်ခံရမှုလည်း ခံခဲ့ရပါတယ်။ ဒီဗွီဒီယိုကို ရိုက်တဲ့သူကလည်း မရရအောင် အနီးကပ် ရိုက်ယူခဲ့ပါတယ်။ ပထမတော့ လှဲရက်အနေအထား အမျိုးသမီးက ကင်မရာသမားကို အရင်မြင်ခဲ့ပြီး အဖော်အမျိုးသားကို သတိပေးခဲ့ပါသေးတယ်။ အဲဒီအခါမှာ အမျိုးသားဟာ ကင်မရာသမားကို လှည့်ကြည့်ကာ လက်ခလယ်ထောင်ပြခဲ့ပါတယ်။ ပြီးတွန်းရတဲ့…
Chin News December 20, 2018
AN PIANG LO, AN PIANG LEH TAWH LO VANG.
Tin, vantirhkoh chuan an hnenah, ‘ hlau suh ilang, ngai rawh u, mi tin ta tur chanchin thra lawmawm êm êm ka rawn thlen che uani, vawiinah hian in tan Davida khuaah Chhandamtu…
Chin News December 19, 2018
တောင်ကိုရီးယား တွင် လူဦးရေနည်းနေ၍ တက္ကသိုလ်ကျောင်းသား ကျောင်းသူတွေ မဖြစ်မနေ ရည်းစားထားနေရ
ဆိုးလ်ရှိ ဒေါင်ဂွတ်နှင့် ကွမ်ဟီတက္ကသိုလ်တို့က ချစ်မှုရေးရာဘာသာရပ်များ ပို့ချနေပြီး ယနေ့ခေတ်လူငယ်တို့သည် မိသားစုဘ၀ မထူထောင်လိုကြတော့သည့်အတွက် ၎င်းတို့ကို အဓိကရည်ရွယ်ကာ ယင်းဘာသာရပ်ကို ပို့ချနေခြင်းဖြစ်သည်။ အိမ်ခြံမြေဈေးနှုန်းမြင့်မားခြင်း၊ အလုပ်အကိုင်ရရန် မလွယ်ကူခြင်းနှင့် ပညာသင်စရိတ်ကြီးမြင့်ခြင်းတို့ကြောင့် ယနေ့ခေတ်လူငယ်အများစုသည် သမီးရည်းစားထားခြင်း၊ အိမ်ထောင်ပြုသားမွေးခြင်းဆိုသည့် ကိစ္စရပ်များကိုစိတ်မဝင်စားကြတော့ပေ။ ထို့ကြောင့် အိမ်ထောင်ပြုသည့်နှုန်းထားတောင်ကိုရီးယားတွင် သိသိသာသာကျဆင်းလာတော့သည်။ ယင်းအတွက် ပါမောက္ခ ဂျန်ဂျီဆွတ်ခ်က ဒန်ဂွတ်တက္ကသိုလ်တွင် ယင်း ဘာသာရပ်ကိုစတင်ပို့ချခြင်းဖြစ်သည်။ ယင်းဘာသာရပ်သည် ကျောင်းသား ကျောင်းသူများကို လက်တွဲဖော်မှန်မှန်ကန် ကန်ရွေးချယ်နည်းနှင့် ယင်းလက်တွဲဖော်နှင့်…
LEADERSHIP OFFICE BEARER leh COMMITTEE MEMBER kan tihte hi
Heng OB leh Committee members te hi pawl rorel khawl an nih avangin Kohhran/Pawl chhiat leh that thuah,achak leh chak lo thuah mawh an phur thui hle a, member pangngai nen chuan tehkhin…
အထပ်မြင့်အဆောက်အအုံကို ဖြတ်ဖောက်ပြီး ဆောက်ထားတဲ့အဝေးပြေးလမ်း
ဒီအဆောက်အအုံကတော့ ဂျပန်နိုင်ငံက ဆန်းဆန်းပြားပြား ဒီဇိုင်း နဲ့ အဆောက်အအုံတစ်ခုဖြစ်ပါတယ် ။ ဂျပန်နိုင်ငံ Fukushima-ku စီရင်စုထဲမှာ တည်ရှိတဲ့ဂိတ်တံခါးပေါက်တာဝါ(Gate Tower) ဆိုတဲ့ အဆောက်အအုံပါ။ Gate Tower လို့ခေါ်ရခြင်းအကြောင်းကတော့ ကားတွေအတွက် တံခါးပေါက်တစ်ပေါက်သဖွယ် ဖြစ်နေလို့ပါ။ ဒီအဆောက်အအုံ ဒီဇိုင်းကတော့ အစကတည်းက တမင်သက်သက်ဆောက်လုပ်ခဲ့တာတော့ မဟုတ်ပါဘူး။ ၁၉ရာစု အ လယ်လောက်က ဒီနေရာဟာ သစ်သား နဲ့ မီးသွေး ရောင်းဝင်ရေးလုပ်ငန်း…
Kum 12 asi mi Ngakchia pate nih cacawn kholo mi caah sianginn atuah piak, khuaruah har ngai asi.
Amin cu Leonardo Nicanor Quinteros asi, Argentina ram San Juan City pawng Las Piedritas Distaum mi kum 12 asi mi Ngakchia pakhat asi. Amah hi ngakchiate asi hmanh ah amah bantukin sianginn kai…